Meizu Pro 6, famakafakana ny sainan'ny mpanamboatra Aziatika vaovao Androidsis
Meizu Pro 6, famakafakana ny sainan'ny mpanamboatra Aziatika vaovao
Meizu Iray amin'ireo mpanamboatra miditra tsikelikely amin'ny tsena eropeana amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo terminal tena mandanjalanja. Zava-misy i Huawei no mpanjakàn'ny tsena sinoa, saingy Meizu dia manomboka ho referansa mazava na ao anatiny na ivelan'i Azia.
Izahay dia mitondra anao feno Meizu Pro 6 famerenana, terminal iray tena feno izay hahagaga anao amin'ny kalitaon'ny famaranana sy ny mety. Famaranana avo lenta izay 449 euro ny vidiny ary tsy ho diso fanantenana ianao.
1 Meizu Pro 6 dia misongadina amin'ny kalitaon'ny famaranana
2 Toetra mampiavaka ny Meizu Pro 6
3 Meizu miloka amin'ny teknolojia AMOLED eo amin'ny efijery ary tsy diso
4 Fakan-tsary izay hahagaga anao amin'ny heriny
4.1 Sarin'ny sary nalaina tamin'ny Meizu Pro 6
5 Flyme 5.6, interface bloatware madio
6 Fahaleovan-tena izay tsy miankina amin'ny tohiny rehetra
7 Feo tena mandanjalanja
Meizu Pro 6 dia misongadina amin'ny kalitaon'ny famaranana
Ny zavatra voalohany eritreretinao rehefa mahita ny Meizu Pro 6 ianao dia Manana tsipika mitovy amin'ny an'ny modely Apple na HTC sasany izy. Ok, marina fa ny famolavolana nampiasaina dia nitovy nandritra ny roa taona, saingy mazava ny fisotroan'i Meizu, hoy, loharanom-baovao hafa, hamoronana ny terminal-ny. Tsy misy zava-baovao eto ambanin'ny masoandro.
Mazava ho azy, mahita vatana tena kanto sy azo tantanana isika namboarina tamin'ny vy manome ny telefaona vaovao tena tsara. Ho an'izany, ny mpanamboatra dia nisafidy ny hanangana ny vatana amin'ny sakana tokana, manome tetezamita eo anelanelan'ny fefy sy ny efijery farany ambany.
Nahita izy ireo fa manana ny Meizu Pro 6 fahatsapana faharetana lehibe, ankoatry ny maha finday somary tantanana azy noho ny fandrefesana azy, 147.7 x 70.8 x 7.3 mm. Izaho manokana dia tiako fa milanja ny telefaona ka ny grama 160 dia toa mihoatra ny ampy.
Izany dia tsy maintsy ampiana ny zava-misye aorian'ny fampiasana iray volana tsy misy karazana fonony na mpiaro, ny Meizu Pro 6 dia niaritra nefa tsy niaritra karazana marika. Zavatra miavaka amin'ny terminal misy ireo toetra ireo.
Eo anoloana eo amin'ny Meizu Pro 6 no ahitantsika azy Fampisehoana 5.2-inch izay misy bezela kely indrindramanararaotra tsara ny eo anoloana ny terminal. Eo ihany koa no nahitan'izy ireo ny fakantsary anoloana sy ny mpandahateny eo ambony, raha eo ambany kosa no hahitantsika ny bokotra Home ara-batana, izay mihetsika ho toy ny sensor amin'ny dian-tànana ary ny fikajiana azy dia manome valiny amin'ny fihetsika.
Ny aoriana dia manana ny fakantsary lehibe, miorina amin'ny faritra ambony, ary etsy ambany dia misy flash LED miaraka amin'ny sary famantarana Meizu. Ny ampahany tokana manapotika ny estetika dia ny faritry ny tarika antena, na dia tsy mampihemotra ny endrika tsy mampino an'ny Meizu Pro 6 aza izany.
El head jack jack dia eo amin'ny farany ambany ny terminal, zavatra tsy tiako loatra, fa toy ny olan'ny lanja ihany, momba ny loko milay. Asongadino ny mpandahateny ambany, apetraka tsara ary mamela hitazona haavon'ny feo tsara na dia manarona ampahany aza ny vokatra avoakany isika.
Hoy aho, ny Meizu Pro 6 dia telefaona mahay mandanjalanja eo amin'ny lafiny famolavolana ary izany dia mampiseho ny asa tsara ataon'ny mpanamboatra amin'io lafiny io. Satria efa nolazaiko anao fa ny sainan'i Meizu vaovao dia toa terminal lehibe raha vao jerena ary rehefa raisinao izany dia manamafy ianao fa miatrika telefaona avo lenta.
Toetra mampiavaka ny Meizu Pro 6
lafiny 147.7 x 70.8 x 7.3 mm
Operating System Android 6.0 Marshmallow eo ambanin'ny sosona Flyme 5.6 manokana
efijery 5.2-inch AMOLED miaraka amin'ny vahaolana 1920 x 1080 pixel sy 424 dpi
processeur 25-core MediaTek Helio X10 (2 Cortex - A72; 4 Cortex - A53; 4 Cortex A53) 2.5 GHz
GPU Mali-T880 MP4 amin'ny 850MHz
Tahiry anatiny 32 GB na 64 Gb miankina amin'ny maodely azo ovaina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 256 GB
Fakan-tsary aoriana 21 megapixel sensor miaraka amin'ny autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual-tone LED flash / Geolocation / 1080p video recording amin'ny 30fps / f / 2.2
Fakan-tsary mialoha 5 MPX miaraka amin'ny flash LED aloha sy HDR auto
Conectividad DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / 2G Bands; GSM 850/900/1800/1900; 3G band (HSDPA 850/900/1900/2100 -) 4G fatorana 1 (2100) 3 (1800) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 19 (800) 20 (800) 28 (700) 40 (2300 )
Fitaovana hafa haingam-pandeha famandrihana rafitra / Fingerprint sensor
bateria 2.560 mAh tsy azo esorina
vidiny 449 euros
Raha vao jerena dia toa ilay Meizu Pro 6 dia terminal mahery vaika Fa ahoana no hataon'ny mpanamory Mediatek Helio X25 anao? Fantatray fa kinova nohatsaraina tamin'ny X20 izy io, saingy handrefy ve izany? Eny ny valinteniko.
Ary izany no SoC X25 miaraka amin'ny RAM 4 GB Ireo ao amin'ny Meizu Pro 6 dia manome ny telefaona hery lehibe, mamela anao hifindra ny lalao rehetra nefa tsy mijaly karazana fijanonana mandritra ny playback.
Tsy maninona raha mampiasa rindranasa mitaky na manana varavarankely vitsivitsy misokatra isika, manohitra ny Pro 6 tsy manelingelina ny anjarantsika. Ilay tokana fa? Ny famohana ny efijery izay miaritra fanemorana kely angamba vokatry ny fitantanana diso ny fomba torimaso. Ny ratsy kely ambany izay manelingelina nefa tsy manimba ny fampiasana azy isan'andro ary manantena aho fa hamaha ny fanavaozam-baovao amin'ny ho avy.
El miasa tsara koa ny mpamaky sidina manolotra fotoana famaliana mihoatra ny sahaza sy famaritana tena avo lenta mamela, ohatra, ny fanaovana scanner ny dian-tànana amin'ny toerana samihafa nefa tsy manana olana hahafantarana azy.
Ary tsy afaka manadino momba izany isika Kitiho ny fihetsika mikasika ny sensor biometrika izay ahafahanao mampiasa ny bokotra Home hampavitrika multitasking na hihemotra. Raha te hahita ny safidy multitasking dia tsy maintsy soloantsika ny rantsan-tanantsika avy any ivelany mankany amin'ny efijery eo amin'ny farany ambany raha manome tsotra ny bokotra afovoany isika dia hiverina. Tamin'ny voalohany dia nila ahy be dia be ny nahazatra azy ary nanozona ny fotoana nampiharan'i Meizu ity rafitra ity aho, fa raha vao zatra izany ianao, ny tena izy dia rafitra milamina sy manam-pahaizana ampiasaina.
Meizu miloka amin'ny teknolojia AMOLED eo amin'ny efijery ary tsy diso
Ny Meizu Pro 6 dia manana Efijery 5.2-inch misy tontonana AMOLED novokarin'i Samsung. Mihabetsaka ny mpanamboatra miloka amin'ny vahaolana natolotr'i Samsung ary ny marina dia fanapahan-kevitra feno fahendrena izany.
Con 424 teboka isaky ny santimetatra Ny efijery Meizu Pro 6 dia toa tsara tokoa manome loko mafana sy mazava eo ambonin'ny salan'isa, ankoatry ny fanolorana mainty tonga lafatra, toy ny mahazatra amin'ity karazana efijery ity.
Ny interface interface an'ny Meizu Pro 6, Flyme 5.6 dia mamela Misafidiana toerana telo samihafa amin'ny efijery mangatsiaka mankany amin'ny iray mafana. Mazava ho azy, ny kalitao dia tsy misy ifandraisany amin'ny tolotra Huawei. Amin'ny tranga Meizu Pro 6, ny maody mafana dia miloko volomboasary amin'ny loko rehetra ka tsara kokoa ny mamela azy tahaka izao ary atsahatra ny fanandramana.
Hatramin'ny nampidiran'ny LG ny rafitra Knock On, ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia nitsambikina tamin'ny kalesy. Ary ny Meizu Pro 6 dia tsy ho diso anjara. Atỳ Azontsika atao ny mampihetsika ny paompy indroa hanodina sy hamonoana ny efijery. Ho fanampin'izany, ity fihetsika ity dia azo ampitaina amin'ny mpamaky ny rantsantanana, izay tena ilaina kokoa amin'ny fahitako azy.
Ary tsy afaka manadino ny zava-misy fa ny efijery amin'ny Meizu Pro 6 mampiditra ny teknolojia Force Touch, mamela anao hanao fihetsika vitsivitsy toy ny fampiatoana ny menus faharoa raha tsindrio bokotra lava kokoa.
Saingy tsy ny rehetra dia vaovao tsara: ny zoro fijerena mihoatra ny marina fa ny Meizu Pro 6 dia mijaly be any ivelany noho ny 350 nits ny efijery, fahaverezan'ny fahitana be dia be amin'ny andro mamiratra, na dia tsy mamirapiratra mivantana amin'ny efijery aza ny masoandro.
Fakan-tsary izay hahagaga anao amin'ny heriny
Iray amin'ireo fiasa malaza indrindra amin'ny Meizu Pro 6 tonga miaraka amin'ny fakantsary mahery. Ny sensor 21 megapixel an'ny finday Meizu vaovao dia manome fahombiazana tena tsara, manasongadina ny hafainganan'ny fakana sary na dia ampandehanana ny maody HDR aza.
Toy ny mahazatra amin'ny toe-jiro maivana, manomboka tsy dia misy kalitao intsony ny sary ary mipoitra ny tabataba mahatsiravina, zavatra mahazatra ho an'ny telefaona, na tsara toy inona aza ny fakantsary. Mazava ho azy, ny tsy ampoizina lehibe dia miaraka amin'ny zava-misy tsy mijaly ny fifantohana na dia eo aza ny fahitana ambany, antsipiriany ho raisina.
Etsy ankilany, rehefa maka sary amin'ny tontolo mamiratra ianao hahagaga anao ny fisamborana anao amin'ny alàlan'ny fanomezana loko mazava sy maranitra amin'ny haavon'ny terminal farany tsara indrindra eny an-tsena. Amin'ity dia tsy maintsy ampidirintsika ny rindrambaiko matanjaka ao amin'ny fakan-tsary Meizu Pro 6, izay manana rafitra feno izay hanome antsika marindrano tsara haka sary samihafa miaraka amina kalitao miavaka.
Ary izany no rindrambaiko fakantsary Hamela antsika haka sary haingana sy mora amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra na, raha manambina isika, dia afaka mampihetsika ny maody amin'ny tanana mba hifehezana ireo masontsivana toy ny halalin'ny fifantohana, ISO, ny fahatsapana na ny halaviran-dinika.
La fakan-tsary frontal, Miaraka amin'ny fanapahan-keviny 5 megapixel, mahafeno ny andrasana izany ary hanafaka anao amin'ny olana be rehefa hanao selfie na antso an-tsary, fa aza manantena fakana sary lehibe koa avy eo. Raha te haka sary tsara ianao dia mifantoha amin'ny fakantsary any aoriana mahery.
Sarin'ny sary nalaina tamin'ny Meizu Pro 6
Flyme 5.6, interface bloatware madio
Efa nolazaiko taminao fa mandra-pahazatrao ny rafitr'izy ireo hampavitrika multitasking dia hijaly kely ianao. Fa rehefa tratranao izany dia ny marina dia izay ny interface izay nampiharin'i Meizu no tsara indrindra nozahako.
Saika madio ny rafitra, ny magazay fampiharana Google sy ny Goofle Maps ihany no ho hitantsika. Ny zavatra hafa rehetra tsy maintsy ampidinintsika amin'ny tenantsika. Mazava ho azy, manana mpilalao mozika manokana sy mpitantana mailaka azy i Flyme, saingy aleoko miloka amin'ny vahaolana Google hatramin'ny nahazatra azy ireo.
Lazao ihany amin'ny farany fa ny Meizu Pro 6, toy ny ankamaroan'ny marika aziatika, miloka amin'ny interface desktop-based, raha tokony ho ilay mpantsaka fampiharana malaza hita amin'ny ankamaroan'ny terminal. Tsy misy na inona na inona hitsikerana satria efa zatra an'ity interface ity vetivety ianao.
Fahaleovan-tena izay tsy miankina amin'ny tohiny rehetra
Ny fantson'ireo toetra ireo dia tokony hanana 3.000 mAh farafaharatsiny. Ny olana dia nanapa-kevitra i Meizu fa hampiditra a Bateria 2.560 mAh mba tsy hampisy hateviny bebe kokoa amin'ny telefaona. Fahadisoana lehibe.
Ary ny fizakantenan'ny Meizu Pro 6 no teboka malemy indrindra amin'ny terminal. Mitandrema, tsy milaza aho hoe ho faty ny telefaona amin'ny antoandro, fa raha manome tehina be dia be isika dia ho tonga amin'ny alina somary ara-drariny ny alina.
Ataoko mazava tsara ihany koa izany tsy fahaleovan-tena mahatsiravina izany, fa efa nahazatra ahy ny manana terminal izay misy bateria manolotra fampisehoana iray andro sy sasany ary mahita fa isak'alina aho dia tsy maintsy mameno telefaona dia somary diso fanantenana aho.
Feo tena mandanjalanja
Raha nandiso fanantenana ahy ny fizakantena, kalitaon'ny feo avo eny Meizu Pro 6 Nahagaga ahy izany. Ary betsaka. Tamin'ny voalohany, rehefa hitako ny mpandahateny mijanona eo amin'ny farany ambany dia nieritreritra aho fa hanarona ny vokany tsy tapaka izy io fa ny tena izy dia ny toerana nametrahana azy no tena manahirana ny manarona tanteraka ireo output audio.
El tena tsara ny feo, manolotra kalitao avo lenta nefa tsy manodikodina ny kalitao amin'ny fotoana rehetra. Ary ny écouteur dia nanao fampisehoana an-tsoratra ihany koa, manome feo avo sy mazava. Raha fintinina, iray amin'ireo fizarana mahagaga indrindra amin'ny Meizu Pro 6.
Ny Meizu Pro 6 dia telefaona tena feno sy mifandanja izay misongadina amina endrika tena manintona ary koa toetra teknika manandratra azy eo an-tampon'ny sehatra. Ny bateriny dia mandanja kely ny traikefan'ny mpampiasa, na dia amin'ny teny manerantany aza dia afaka milaza aho fa Meizu dia nahavita asa tena tsara tamin'ny Meizu Pro 6 vaovao.
Famolavolana premium sy famaranana
Ny mpandahateny dia manolotra kalitaon'ny feo tena tsara
Ny bateria dia toa somary fohy raha oharina amin'ireo maodely hafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Meizu Pro 6, famakafakana ny sainan'ny mpanamboatra Aziatika vaovao
Samsung Galaxy Note 7 voarara amin'ny sidina amerikana rehetra